Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Viking Cruises: Maxaa cusub?
Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! • saaciday inay • War-Saxaafadeed
Viking ayaa maanta ku dhawaaqday markabkeeda cusub ee badweynta, Viking Saturn®, wuxuu ku biiri doonaa shirkadda abaalmarinta ku guuleysatay horraantii 2023.
Viking ayaa maanta ku dhawaaqday markabkeedii ugu cusbaa ee badda, Viking Saturn®, waxay ku biiri doontaa shirkaddii abaalmarinta ku guuleysatay horraantii 2023. Markabka walaasheed ee martida ah ee 930-ka ah wuxuu ku qaadan doonaa xilli-ciyaareedkeeda ugu horreeya saddex shixnadood oo cusub oo ka socda dalalka Scandinavian iyo Nordic, oo ay ku jiraan laba safar oo 15-maalmood ah, Iconic Iceland, Greenland & Canada, iyo Iceland & Arctic Explorer ee Norway, iyo 29 maalmood Greenland, Iceland, Norway & Beyond safarka. Marka lagu daro saddexda safar ee cusub, Viking ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqday in shirkaddu ay dib u soo celin doonto 8-maalmood oo caan ah Quruxda Dabiiciga ah ee Iceland socdaalku wuxuu bilaabmayaa Ogosto 2023.
“Kumanaanka martida ah ee shiraacday doonteenna Ku soo dhawoow Back safarka Iceland xagaagii la soo dhaafay wuxuu ku riyaaqay waayo-aragnimada aad u badan waxay bixiyeen qiimeyn heer-rikoodh ah, ”ayuu yiri Torstein Hagen, Guddoomiyaha Viking. “Safarradan cusub ayaa ku habboon socdaalayaasha xiisaha leh iyo waddooyinka raadraaca ee sahamiyayaashii hore ee Viking ee Iceland iyo meelaha kale ee Waqooyiga Atlantikada ee lagu yaqaan quruxda dabiiciga ah. Waxaan sugeynaa soo dhaweyn Viking Saturn doonyahayaga iyo siinta martida xitaa siyaabo badan oo lagu raaxaysto qaybtan gaarka ah ee adduunka. ”
Cusub iyo Soo Noqoshada 2023 Socdaallada Waqooyiga Yurub:
Iconic Iceland, Greenland & Canada (CUSUB) -Socdaalkan 15-ka maalmood ah wuxuu u dhexeeyaa Iceland, Greenland iyo gobollada Kanada ee Newfoundland iyo Nova Scotia. Doonida u dhexeysa New York City iyo Reykjavik, martidu waxay u bogi doonaan muuqaalka foolkaanada ee Jasiiradaha Westman, waxay ku raaxeysan doonaan xawaaraha raaxada ee Djúpivogur, waxayna socodsiin doonaan waddooyinka magaalooyinka quruxda badan sida Seydisfjördur iyo Akureyri.
Iceland & Arctic Explorer ee Norway (CUSUB) -Safarkan 15-ka maalmood ah, martidu waxay ka ogaan doonaan nolosha waqooyiga fog inta lagu gudajiro socdaalka Arctic Circle iyo xeebaha fog ee Norway iyo Iceland. Ka dib markaad ku raaxaysato joogitaan habeen ah Viking SaturnDekedda guriga ee Bergen, raac raadkii Vikings markii aad booqanayso Honningvåg ee fog -fog North Cape oo aad sahamiso Longyearbyen, oo hoy u ah bahasha digaagga ka badan dadka.
Greenland, Iceland, Norway & Beyond (CUSUB) -Martidu waxay kaloo dooran karaan inay isku daraan labadan safar ee cusub ee safarka 29-maalmood ee xiisaha leh. Markay ka tagayaan magaaladii hore ee Hanseatic League ee Bergen, martidu waxay raadin doonaan waddada Vikings iyagoo u sii maraya waddamada Scandinavian -ka ee Norway, Iceland iyo Greenland ka hor inta aysan u socdaalin Kanada oo ay ku soo gabagabeyn doonaan New York.
Quruxda Dabiiciga ah ee Iceland- Ku soo noqoshada 2023, safarkan caanka ah ee 8-maalmood ah ee wareega wareega ah ee ka socda Reykjavik wuxuu sahamiyaa xeebaha quruxda badan ee Iceland. Doonida Viking Star®, martidu waxay la kulmi doonaan qurux dabiici ah oo aan la qiyaasi karin, marqaatiyaal qulqulaya biyo -dhacyo iyo muuqaallo fjord aan caadi ahayn. Raac wadadii sahamiyaha dhiiranaanta Leif Eriksson, u fiirso duurjoogta maxalliga ah oo naftaada ku dhex quuso dabeecadda.
Maraakiibta badda ee Viking waxay leeyihiin culeys dhan 47,800 tan, oo leh 465 qolal dowladeed oo martigelin kara 930 marti. Maraakiibta badda ee abaalmarinta ku guuleystay ee Viking waxaa ka mid ah Viking Star®, Badda Viking®,Viking Sky®,Viking Orion®, Viking Jupiter®iyo Viking Venus®. Viking Mars®iyoViking Neptune®ku biiri doona maraakiibta 2022; Viking Saturn waxay ku biiri doontaa horraanta 2023. Waxaa lagu qeexay Cruise Critic sida “maraakiibta yaryar,” maraakiibta badda ee Viking waxay leeyihiin qaab casri ah oo Scandinavian ah oo leh taabasho xarrago leh, meelo u dhow iyo feejignaan faahfaahsan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Dhammaan qolalka Veranda State: Martidu waxay ka dooran kartaa shan qaybood oo ka mid ah qolka dawladda, laga bilaabo 270 sq.Ft TV-yada LCD-ka oo leh filimo-dalbasho, Wi-Fi bilaash ah iyo musqulo abaal-marin leh oo leh qubeysyo waaweyn, Freyja qaali ah® alaabta qubeyska iyo sagxadaha kulul.
Suite Explorer: Maraakiibtu waxay ka kooban yihiin 14 Explorer Suites, kuwaas oo ah laba qol oo ka kooban 757 ilaa 1,163 sq. Ft. Iyada oo aragtiyo ballaadhan laga helayo verandas gaarka loo duubay, iyo sidoo kale adeegyada iyo mudnaanta ugu badan ee nooc kasta oo saaran, Explorer Suites waxay bixisaa meesha ugu dambaysa martida.
Laba Doorasho Barkad: Ka sokow Barkadda Weyn oo leh saqaf dib loo laaban karo oo oggolaanaya dabaasha xilli kasta, maraakiibtu waxay soo bandhigaan barkad Infinity Pool ah oo nooceedu yahay nooca ugu horreysa oo nooceeda ah oo ka soo baxda dhinaca dambe, taasoo u oggolaanaysa martida inay ku dabaashaan hareeraha meeshii ay u socdeen.
LivNordic Spa: Iyada oo la ilaalinayo dhaxalka Nordic ee Viking, The Spa on board waxaa loogu talagalay falsafadda fayoobaanta guud ee Scandinavia-laga soo bilaabo dhaqankii qarniyadii hore ee sauna ilaa Barafka Grotto halkaas oo barafkii barafku si tartiib ah uga soo degay saqafka iyada oo hawada qaboojisay.
Qolka sahamiyeyaasha iyo Mamsen: La wadaag cocktail asxaabtaada. Ku raag quraacda Noorweey iyo buugga taariikhda badda. Qolka sahamiyaasha iyo hilibka cunnada ee Mamsen waa meelo laga fikiro oo ku yaal qaansada markabka waxaana loogu talagalay inay metelaan ruuxa Scandinavian-ka si loo helo nasasho dhammaystiran iyo la yaabka aragtiyada xaaqidda ee daaqadaha dhaadheer.
Wintergarden: Martida raadinaysa degenaansho ayaa ka heli doonta Wintergarden. Meelkan quruxda badan ee ku hoos jira dahaarka alwaaxda Scandinavian -ka, martidu waxay ku raaxaysan karaan adeegga shaaha galabtii.
Xulashada Cunnada: Maraakiibta Viking waxay bixiyaan siddeed ikhtiyaar oo cuntada ah, dhammaantoodna wax lacag ah oo dheeraad ah ama lacag ah laga bixin maayo cuntada wanaagsan ee Makhaayadda, oo u adeegta saddex cunto oo buuxa iyo noocyo kala duwan oo cunno -cunno ah, iyo Café -ka Adduunka, oo ay ka muuqdaan qiimaha caalamiga ah iyo takhasusyada gobollada oo ay ku jiraan sushi iyo baarka qabow ee badda-si loogu helo waayo-aragnimo kale oo wax lagu cuno oo ku taal Shaxda Chef-ka, oo bixisa menu dhadhamin badan leh oo ay ku jiraan lammaaneyaal khamri ah, iyo Manfredi, oo ka muuqda baastada hadda la diyaariyey iyo kuwa ugu cadcad Talyaaniga. The Pool Grill waxay ku takhasustay burgers -ka gourmet -ka ah, halka shaaha galabta iyo scones laga heli karo Wintergarden. Mamsen wuxuu u adeegaa qiimaha jaadka ee Noorwiijiga, iyo adeegga qolka 24-ka saac ah oo u oggolaanaya dhammaan martida inay ku raaxaystaan ​​saxanno saxeexyo badan iyagoo ku raaxaysanaya qolkooda dawladda. Intaas waxaa sii dheer, xulashooyin badan oo loogu talagalay fadhiga bannaanka xilliga cuntada, maraakiibta badda ee Viking ayaa bixiya kuwa ugu badan al fresco cuntada badda. Intaa waxaa sii dheer, Jadwalka Jikada wuxuu ku takhasusay suxuunta gobolka min suuqa ilaa miiska.
Kobcinta Dhaqanka: Waaya -aragnimada Viking -ka markab ilaa xeeb ayaa loogu talagalay helitaan aan hore loo arag iyo kobcinta dhaqanka. Viking Resident Taariikhyahanadu waxay bixiyaan waxbarasho taariikheed iyo dhaqan oo heer sare ah oo u gaar ah safarka, iyagoo siinaya aragti aad u qiimo badan taariikhda hodanka ah ee meesha loo socdo. Macallimiinta martida ah ee khubarada ku ah beertooda ayaa iftiiminaya farshaxanka loo socdo, dhismaha, muusigga, juquraafiga, dunida dabiiciga ah iyo qaar kaloo badan. Bandhigyada Goobtu waxay matalaan farshaxanka dhaqanka ee ugu caansan gobolka - ha ahaato opera Talyaani ama fado Bortuqiis. Muusikiistayaasha Heesaha Degganeyaasha — pianistayaasha, gitaarka, violinistayaasha iyo khaladaadka - ayaa sameeya halabuurrada caadiga ah maraakiibta oo dhan. Iyo Fasallada Cunnada ee Miiska Jikada, Dugsiga karinta ee dusha saaran ee Viking, waxay xoogga saaraan cunnada gobolka.
Waxyiga Nordic: Xitaa tafaasiisha ugu yar waxay ka qaadanayaan dhiirrigelintooda ruuxa sahaminta ee Vikings -kii asalka ahaa, taasoo ka tarjumaysa dhaqammada Waqooyiga Yurub ee qotada dheer. Geedo alwaax khafiif ah, taabasho dhaldhalaalaan iyo teak, dhagaxa iswiidhishka iyo juniper udgoon ayaa ka muuqda dhammaan goobaha dadweynaha iyo Spa. Naqshadda Clinker-ka lagu dhisay ee Viking Bar waxay muraayad ka dhigaysaa qaabka dhismaha Viking Longships-kii asalka ahaa. Xarunta Dhaxalka Viking waxay bixisaa taariikhda iyo macnaha guud laga soo bilaabo Wakhtigii Viking. Iyo jilayaal ka soo jeeda Mythology Norse ayaa si hoose loogu daray naqshadda, iyagoo siinaya martida xiisaha leh dhiirigelin si ay u sii baadhaan dhaxalka Viking ee Waqooyiga.
Digniin deg deg ah oo uu soo saaray Xoghayaha Guud ee Sharafta leh ee UNWTO...
Severin Hotel: Rakaabka ugu jecel 300 maalin kasta